कस्तो रह्यो २०२१, के सन् २०२२ मा खुशी फर्किएला ? (रिर्पोटसहित) « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
कस्तो रह्यो २०२१, के सन् २०२२ मा खुशी फर्किएला ? (रिर्पोटसहित)
काठमाडौं । विश्वमा यस वर्ष अर्थात सन् २०२१ मा विभिन्न घटना भए । कोभिड महामारी, अफगानिस्तानमा फेरी भएको तालिबानकोउदय र कोभिडको घातक दोस्रो लहर जस्ता घटनाले विशेष स्थान पाएका छन् । मेलम्ची नदीमा आएको भयानक बाढी र यसको व्यापक क्षति पनि यसवर्ष मुख्य घटनाका रुपमा देखिएको छ ।
विश्वभरी यसवर्ष विभिन्न घटना भएका छन् । ति मध्ये केहि मुख्य घटनाले विशेष स्थान पाएका छन् । नया“ भेरिअन्टका रुपमा देखिएको ओमिक्रोनले विश्वभर पहिलो घटनाका रुपमा प्राथामिकता पायो । दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक फेला परेको ओमिक्रोन भेरिअन्ट अहिलेसम्म भारतसहित ४० भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाभाइरसको नया“ भेरिअन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण एकैदिन एक्कासी पा“च गुनाले बढेको देखियो । अफगानस्तानमा तालिवानको उदय भएको घटनालाई दोस्रो स्थान दिइएको छ । दुई दशक लामो युद्धपछि अमेरिकाले फिर्ती प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी गरिरह“दा तालिबानले आफ्नो नियन्त्रण बढाउ“दै लग्यो, सरकारलाई उनीहरूले विस्थापित गर्ने चिन्ता बढ्दै गएको देखियो । अफगानिस्तानमा तालिबानले आफ्नो पकड बलियो बनाउ“दै लगेको गतिले कतिपयलाई आश्चर्य लागेको थियो ।
अफगान सरकारले पकड कायम राख्न संघर्ष गरिरहेका बेला तालिबान विद्रोहीहरू राजधानी काबुलमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोडेर पलायन भएका थिए । मुलुककमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो मेलम्ची बाढी मुख्य तेस्रो घटना मानिएको छ । जसमा अर्बौ“ रुपैया“को क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखले बताएका छन् । असार पहिलो साता आएको बाढिले अतुलनिय क्षति पुग्यो । धेरै घरवारविहिन भए । आधुनिक इतिहासमा हालसम्म ब्योहोर्नु नपरेको अत्यन्तै ठुलो वहाव बेहोर्नुप¥यो । विश्व महाशक्ति अमेरिका बर्ष २०२१ मा दुइ कारणले चर्चामा रह्यो– राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनको जीत र अघिल्ला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा प्रहरीको गोलीले मारिएका अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लायडको न्यायका लागि चलाइएको ब्ल्याक लाइभ म्याटर्स आन्दोलनका कारण । उसो त २०२१ को भारतको किसान आन्दोलन पनि दुइ तिहाइको मोदी सरकारलाई झुकाउन सक्षम भयो । उता श्रीलंकाको गृहयुद्धमा गोर्खा सैनिकको प्रयोग भएको समाचारले पनि उत्तिकै प्राथामिकता पायो । विश्वका अन्य कैयौ“ लडाइ“मा जस्तै श्रीलंकाको गृहयुद्धमा पनि भारतीय सेनामा कार्यरत कैयौ“ नेपालीहरू जीवनभरिका लागि चोट पाए ।
उक्त लडाइ“मा भारतीय सेनाका करिब १२ सय सैनिकहरू मारिएको विवरण छ । कोरोना महामारीकै बेलामा खोप वितरणमा एकप्रकारको बेथिती देखिएको थियो । कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप वितरणमा देखा परेको बेथितिले पनि चर्चा पायो । संयुक्त अधिराज्यको राजधानी लन्डनमा एक व्यक्ति बगै“चामा आराम गरीरहेका बेला एउटा विमानबाट खसालिएको मानव मलमूत्र उनकै सरिरमा छरपस्ट भयो । जुलाई महिनाको मध्यतिर भएको त्यो घटना काउन्सिलको बैठकमा छलफल भएपछि बल्ल चर्चामा आएको थियो । यस्तै संसारकै सबैभन्दा प्रदूषितमध्येको एक सहर बेइजिङलेआधाभन्दा बढी भूभागको मौसममा कृत्रिम परिवर्तन ल्याउदै गरेको समाचारले पनि निकै चर्च पायो । उताअफगानिस्तानका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गरिएका विवरणहरूमा राष्ट्रपति अशरफ गनीले देश छोडेको खबर पनि चर्चित बन्यो । सरकारको तर्फबाट तालिबानस“ग वार्ताका लागि जिम्मेवार निकायका प्रमुख डा. अब्दुल्लाह गनीले देश छाडेको पुष्टि गरेका थिए । यस्तै जर्मनीमा एक नर्सले कोभिड खोप भनेर आठ हजार जनालाई नुनपानी लगाइदिइन् । यो घटना गत मार्च र अप्रिलमा खुलासा भयो । बिबिसीका अनुसार नर्थ सी नजिकै फ्रिसल्यान्डस्थित खोप केन्द्रमा भएको उक्त घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । सन् २०२१ को सुरुदेखि विश्वका विभिन्न देशमा कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप अभियान थालिएस“गै आशा पलाएको थियो । नेपालले पनि यो वर्षको सुरुमा नै खोप अभियान थालेको थियो ।
वर्षैभरि कोरोनाभाइरस महामारी, त्यसका नया“ भेरिअन्टका चर्चा धेरै भए । उसो त ओमिक्रोनको चर्चा नेपाल सहित विश्वभर बढ्दैछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ जना संक्रमित नेपालमा भेटिएको पुष्टि गरेको छ । सामाजिक दूरी, मास्कको प्रयोगलगायत जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा फेरि कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । फेरी लकडाउन हुने होकि भन्ने त्रास पनि बढेको छ । यसस“ग सम्बन्धित समाचारले विशेष प्राथामिकता पाइरहेका छन् । कोभिडको घातक दोस्रो लहर खेपेको विश्व फेरी वर्षको अन्त्यतिर पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको ओमिक्रोन भेरिअन्टको त्रासमा छ ।
माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि : पदाधिकारी चयन गर्ने सम्भावना कम
काठमाडौ, २० असार । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दैछ । हिजोदेखि सुरु भएको बैठकमा प्रदेश नेताहरूले पालिका चुनावमा कांग्रेस इमानदार नभएको
जसपाबाट प्रदेश सांसदसहित दुई जना निष्कासित
जनकपुरधाम, २० असार । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मधेस प्रदेशका एक जना सांसदसहित दुई जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । गत वैशाखमा भएको स्थानीय
नेपाललाई अभ्यास खेलमा लगातार दोस्रो जित
केएमसी स्कुल प्रशासन र मृतकको परिवारबीच सहमति, ८ लाख क्षतिपूर्ति दिइने
पुतलीसडकको एक घरमा आगलागी
काठमाडौंको बिजुलीबजार पुलमा डरलाग्दो दुर्घटना